Teknolojiyadda soo ifbaxday | Martech Zone
Iibka iyo suuqgeynta soo baxaya, xalalka, agabka, adeegyada, xeeladaha, iyo hababka ugu wanagsan ee ganacsiyada ee ka yimid qorayaasha Martech Zone. Oo ay ku jiraan sirdoonka macmal, bots, habaynta luqadda dabiiciga ah, barashada mashiinka, xaqiiqada dhabta ah, iwm.
5 Cashar Oo Laga Bartay In Ka Badan 30 Milyan Oo Qof Iyo Hal Is-dhexgalka Macmiil 2021
Talaado, Juun 21, 2022 Talaado, Juun 21, 2022 Max Koziolek
2015-kii, aniga iyo asaasahayga waxaan dajinay inaan bedelno habka suuqgeyneedyadu u dhisaan xiriirka macaamiishooda. Waa maxay sababtu? Xidhiidhka u dhexeeya macaamiisha iyo warbaahinta dhijitaalka ah ayaa asal ahaan isbeddelay, laakiin suuq-geyntu kamay soo bixin. Waxaan arkay inay jirto dhibaato weyn oo calaamad-to-sanqad ah, iyo haddii aanay calaamaduhu yihiin kuwo aad u khuseeya, ma heli karaan calaamadahooda suuq-geyneed xooggan oo ku filan in laga maqlo meel taagan. Waxaan sidoo kale arkay in bulshada madow ay kor u kacday, halka
accessiBe: Samee goob kasta oo la shahaadeysan karo oo la heli karo iyadoo la adeegsanayo sirdoonka macmal ah
Iyadoo xeerarka gelitaanka goobta ay jireen sanado, shirkaduhu way ka gaabiyeen inay ka jawaabaan. Ma rumaysni inay tahay arrin ku saabsan dareenka ama naxariista dhinaca shirkadaha… Runtii waxaan aaminsanahay in shirkaduhu ay si fudud ugu halgamayaan inay sii wadaan. Tusaale ahaan, Martech Zone ayaa ku liidata helitaankeeda. Waqti badan, waxaan ka shaqeynayay inaan hagaajiyo labadaba summadaha, naqshadeynta, iyo xogta badan ee loo baahan yahay… laakiin si dhib yar ayaan ula socon karaa
Qore: Samee, Daabac, oo Dalbo Tilmaamaha Codkaaga iyo Qaabka Summadaada Kaaliyaha Qoraalka ee AI
Khamiis, May 12, 2022 Khamiis, May 12, 2022 Douglas Karr
Sida shirkadu u fuliso hagaha calaamadaynta si loo hubiyo joogtaynta ururka oo dhan, waxa kale oo aad muhiim u ah in la horumariyo codka iyo qaabka ururkaagu si joogto ah fariimaha ugu wada jira. Codka summadaadu waa muhiim si aad si hufan ugu gudbiso kala duwanaanshahaaga iyo inaad si toos ah ula hadasho oo shucuur ahaan aad ula xidhiidho dhagaystayaashaada. Waa maxay Hagaha Codka iyo Qaabka? Halka hagaha calaamadaynta muuqaalku ay diiradda saaraan calaamadaha, xarfaha, midabada, iyo qaababka kale ee muuqaalka, codka
Sirdoonka Artificial (AI) ayaa si dhakhso ah u noqonaya mid ka mid ah ereyada suuq-geynta ee ugu caansan. Iyo sabab wanaagsan - AI waxay naga caawin kartaa in aan otomaatig u samayno hawlaha soo noqnoqda, shakhsiyaynta dadaallada suuq-geynta, oo aan samayno go'aamo wanagsan, si degdeg ah! Marka ay timaaddo kordhinta muuqaalka calaamadda, AI waxaa loo isticmaali karaa dhowr hawlood oo kala duwan, oo ay ku jiraan suuq-geynta saamaynta, abuurista nuxurka, maareynta warbaahinta bulshada, jiilka hogaanka, SEO, tafatirka sawirka, iyo in ka badan. Hoosta, waxaanu eegi doonaa qaar ka mid ah kuwa ugu fiican